Multilingual Bible: Malagasy, Psalms 128
Malagasy, Psalms 128
1 Fihirana fiakarana. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah, Dia izay mandeha amin'ny lalany.
2 Fa hohaninao tokoa ny asan'ny tananao; Sambatra sady ambinina ianao.
3 Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra Ao anatin'ny tranonao; Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva Manodidina ny latabatrao.
4 Indro, fa toy izany no hitahiana Izay lehilahy matahotra an'i Jehovah.
5 Hitahy anao avy any Ziona anie Jehovah; Ary ho faly hahita ny fahasoavan'i Jerosalema anie ianao Amin'ny andro rehetra hiainanao.
6 Eny, hahita ny zafinao anie ianao; Fiadanana anie ho amin'ny Isiraely.